Apple waxay ku dartay midabo cusub xariggeeda AirTag iyo dhejiska | Wararka IPhone
AirTags waxay noqdeen wax soo saar si buuxda loo hagaajin karo mahadsanid tirada suumanka, suufka iyo alaabada la heli karo. Apple waxay u diyaarisaa isticmaalaha tiro badan oo xulashooyin ah, midabyo iyo naqshado iyo xitaa ikhtiyaarrada habaynta laser ee sheyga laftiisa. Si kastaba ha ahaatee, shirkado kale ayaa iyaguna bilaabay inay suuq galiyaan qalabkooda oo ay siiyaan AirTags taabasho ka duwan. Laba maalmood ka hor qodobka muhiimka ah ee Apple ayaa dhacay iyo kadib suunka cusub ee Apple iyo midabada suufka ah iyo naqshadaha ayaa lagu daray AirTags, Waxaan ku tusinaynaa hoosta.
Midabo badan iyo suurtogalnimada habaynta ee xargaha AirTag
Apple hadda waxay leedahay qalabyo kala duwan si ay u shaqsiyeeyso AirTags. Kuwaas waxaa ka mid ah giraanta furaha maqaar, suunka polyurethane, suunka maqaar, soo jiidashada bacda Hermès, giraanta furaha maqaar Hermès iyo sumadda boorsooyinka Hermès. Dhammaan qalabkaan waxaa lagu heli karaa midabyo badan waxaana laga iibsan karaa Apple Store Online ama dukaanka jirka ee tufaaxa weyn
Daqiiqado kadib markii la dhammeeyay khudbaddii Sebtember 14, Apple waxay si aamusnaan leh u cusboonaysiisay qaybteeda qalabka AirTag iyadoo lagu daray midabyo cusub looxyadan iyo suumanka. Iyaga dhexdooda waxaan ka heli karnaa midabada ocher, saqda dhexe iyo wisteria on furayaasha maqaar.
Midabada ayaa sidoo kale lagu daray Dahab, Bleau Saphir, Jaune d'Or iyo Piment Hermès bacda maqaar -kabka iyo giraanta furaha ah oo qiimaheedu yahay € 299. Intaa waxaa dheer, sumadda boorsooyinka Hermès waxay ku dartay midab cusub Dahab. Qalabkan ugu dambeeya wuxuu leeyahay qiime dhan 449 euro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple waxay ku dartay midabo cusub xariggeeda AirTag iyo suufka
Apple waxay soo saartaa qalab cusub oo loogu talagalay soo -saareyaasha si kor loogu qaado barnaamijyada